तथ्यांकोवाच : रू. ५० करोडको मेडिकल ड्रेसिङ उत्पादन आयात
काठमाडौं (अस) । नेपालमा मेडिकल ड्रेसिङ उत्पादनहरूको आयात वर्षेनि बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०११/१२ मा रू. २२ करोडका यस्ता वस्तु आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा रू. ५० करोड बराबर पुगेको छ । स्वदेशमा मेडिकल ड्रेसिङका सामग्री उत्पादनमैत्री वातावरणको अभावमा विगत दश वर्षको अवधिमा यस्ता वस्तुको आयात करीब २...
तथ्यांकोवाच : दश वर्षमा रू. २ अर्ब ७१ करोडको गर्भनिरोधक रासायनिक औषधिको आयात
काठमाडौं (अस) । नेपालमा गर्भनिरोधक रासायनिक औषधिको आयात ठूलो परिमाणमा हुने गरेको छ । विगत दश वर्षको अवधिमा २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको यस्तो औषधि आयात भएको छ । गर्भनिरोधक रासायनिक औषधिको प्रयोगका थुप्रै स्वास्थ्यजन्य, सामाजिक, जानसांख्यिक र लैंगिक असर रहे तापनि यसको प्रयोग आमरूपमा भइरहेको तथ्यांक...
तथ्यांकोवाच : रू. ९६ करोडको आयुर्वेदिक औषधि आयात
काठमाडौं (अस) । स्वदेशभित्र आयुर्वेदिक औषधिको लामो इतिहास भए तापनि मुलुकमा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा आयुर्वेदिक औषधि आयात भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा करीब रू. ९६ करोड बराबरको आयुर्वेदिक औषधि आयात भएको छ । स्वदेशी आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन उद्योगले पर्याप्त सहयोग, संरक्षण र प्रोत्साहन नपाउँद...
तथ्यांकोवाच : रू. ३७ अर्बको औषधि आयात
काठमाडौं (अस) । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा रू. ३६ अर्ब ३७ करोड बराबरको औषधि आयात भएको छ । सो आयात १० वर्षअघि रू. १३ अर्ब ७२ करोड जतिको भएको थियो । स्वदेशमा सबै प्रकारका औषधि उत्पादन हुन नसक्नु र संरक्षण तथा प्रोत्साहनको अभावले औषधिमा परनिर्भरता बढ्दो छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकलाई औषधिमा...
काठमाडौं (अस) । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा रू. ११ करोड ८८ लाख बराबरको तन्ना आयात भएको छ । तन्नाको आयात आर्थिक वर्ष २००८/०९ मा रू. ८३ लाखको हाराहारीमा थियो । यस अवधिमा तन्नाको आयात करीब १४ गुणाले बढेको देखिन्छ । स्वदेशमा तन्ना उद्योगको विकास हुनु नसक्नु, रेमिट्यान्सजन्य समृद्धिका कारण डिजाइनदार विदेशी...
तथ्यांकोवाच : रू. ७६ करोडका घरायसी प्रयोगका लिनेन आयात
काठमाडौं (अस) । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा रू. ७५ करोड ७८ लाख बराबरका घरायसी प्रयोगका लिनेन आयात भएको छ । सो आयात आर्थिक वर्ष २००८/०९ मा रू. १४ करोड ८२ लाखको हाराहारीमा थियो । यस यस अवधिमा घरायसी प्रयोगका लिनेनको आयात करीब ५ गुणाले बढेको देखिन्छ । स्वदेशमा घरायसी प्रयोगका लिनेन उद्योगको विकास हुनु नसक्न...
तथ्यांकोवाच : रू. ५७ करोडको ब्लाङ्केट आयात
तथ्यांकोवाच : वार्षिक रू. ३५ करोडको पर्दा आयात
काठमाडौं (अस) । नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा मात्र रू. ३५ करोड बराबरको पर्दा आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २००८/०९ मा यसको आयात करीब १ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो । नेपालमा रेमिट्यान्सजन्य समृद्धिले घरायसी सजावटका क्षेत्रको माग बढ्दै गएको र स्वदेशमा पर्दा उद्योग स्थापना हुन नसकेको अवस्थामा आयात बढ्दै गएको हो...
तथ्यांकोवाच : वार्षिक रू. ४ अर्बको लुँगी धोती र सारी आयात
काठमाडौं (अस) । नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा मात्र रू. ४ अर्ब ११ करोड बराबरका लुँगी, धोती र सारी आयात भएको छ । सो आयात आर्थिक वर्ष २००८/०९मा १ अर्ब १३ करोडमा सीमित थियो । नेपालमा रेमिट्यान्सजन्य समृद्धिले फेसन क्षेत्रको माग बढ्दै गएको र स्वदेशमा लँुगी, धोती र सारी उद्योग स्थापना हुन नसकेको अवस्थामा आयात...
तथ्यांकोवाच : रू. ७० लाखको पशु वीर्य आयात
काठमाडौं (अस) । नेपाल हरेक क्षेत्रमा दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै गएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा पशु वीर्यलाई लिन सकिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र ७० लाख रुपैयाँ बराबरको पशु वीर्य आयात भएको छ । यसका दुईथरी प्रभाव छन्– पहिलो नश्ल सुधारका नाममा रैथाने पशुहरूको वंशनाश र दोस्रो नेपालको वाता...
तस्वीर : साधारण सभामा अध्यक्ष गोल्छा
देशको आर्थिक अवस्था सुधारका विषयमा सीबीफिनद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल
२ हजार विन्दुमाथि पुग्यो नेप्से, कुल बजार पूँजीकरण २९ खर्बभन्दा बढी